ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသော ပြည်ပအားကစားသမား တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသော ပြည်ပအားကစားသမား တွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံက အေဒင်ပင်လယ်ကွေ့ တွင် အစောင့်အရှောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုသစ် စေလွှတ်
Bank of China က ပြည်ပရှိ ကျောက်မီးသွေးတူးခြင်း၊ စွမ်းအင်စီမံချက်အသစ်များတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းမည်
ရှန်ဟိုင်းတွင် မောင်းသူမဲ့နည်းပညာဖြင့် လယ်ယာ သီးနှံများ ရိတ်သိမ်း
တရုတ်နိုင်ငံ လေကြောင်းပြပွဲတွင် ပြသမည့် အဆင့်မြင့် လက်နက်ပစ္စည်းများအား ဦးစွာ လေ့လာကြည့်ရအောင်
နှစ်မီတာမြင့်သည့် စပ်မျိုးစပါးပင် တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့် တွင် ရိတ်သိမ်း
ပကတိအရွယ်အစားရှိစစ်သားရုပ်တုများနှင့် ဧကရာဇ် ချင်ရှီဟွမ် ၏ သူရဲကောင်းဗိမာန်
လက်ရှိတွင် ကဘူးလ်လေဆိပ်၌ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းပျံသန်းမှုများအတွက် အသင့်ဖြစ်ပြီဟု တာဝန်ရှိသူပြော
အစ္စရေးနိုင်ငံက F-35 ကိုယ်ပျောက်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်သစ် ၃ စင်း လက်ခံရရှိ
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်တွင် ရုရှားတိုက်လေယာဉ်များက အမေရိကန် ဗုံးကျဲလေယာဉ်အား လိုက်ပါစောင့်ကြည့်
ကနဦးမဲရလဒ်အရ ဂျာမနီ ဖက်ဒရယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိ ဒုဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော SPD ပါတီ ဦးဆောင်နေ
ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲက နျူကလီးယားလက်နက်များ ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ပြောကြား
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ အမျိုးသားအားကစားရုံသစ်အနီးရှိ အိုလံပစ်သင်္ကေတရှေ့တွင် ဇူလိုင် ၈ ရက်က ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော ပြည်သူများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တိုကျို ၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြည်ပမှ အားကစားသမားတစ်ဦးသည် အိုလံပစ်အားကစားပွဲမတိုင်မီ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူများက ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါအားကစားသမားအား ဇူလိုင် ၁၄ ရက်တွင် ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းအား ၁၄ ရက်ကြာ သီးခြားခွဲထား၍ စောင့်ကြည့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အားကစားသမားများ နေထိုင်ရာ နေရာသို့ မဝင်ရသေးကြောင်း ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက စီစဉ်ထားသည့် အဆောက်အဦသို့ သွားရောက်ရာတွင် သို့မဟုတ် နေထိုင်စဉ် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့သော ပထမဆုံး ပြည်ပအားကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူများက အဆိုပါအားကစားသမားမှာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အခြေအနေ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ အိုလံပစ်ဂျူဒိုအသင်း နေထိုင်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံဟိုတယ်တစ်ခု၌ ဝန်ထမ်း ၈ ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရုရှားနိုင်ငံ၏ ရက်စ်ဘီ ခုနှစ်ယောက်တွဲအသင်းမှ အသင်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသထားကြောင်း AFP က အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ (Xinhua)
Overseas athlete infected with COVID-19 in Tokyo
TOKYO, July 15 (Xinhua) — An overseas athlete has tested positive for COVID-19 after arriving in Tokyo ahead of the Olympic Games, organizers said on Thursday.
The Tokyo 2020 organizing committee said that the athlete, who tested positive on Wednesday, was observinga14-day period of self-isolation and has not entered the athletes’ village, Japan’s state broadcaster NHK reported.
This is the first time an overseas athlete who is staying at or was heading toafacility managed by the organizing committee has been found to have COVID-19.
Organizers gave no details of the athlete’s identity or condition.
Eight staff ataJapanese hotel hosting Brazil’s Olympic judo team tested positive, andastaff member from Russia’s rugby sevens team was hospitalized afterapositive test, AFP said earlier. Enditem
Photo – People walk past the Olympic Rings near the new National Stadium in Tokyo, Japan on July 8, 2021. (Photo by Christopher Jue/Xinhua)
ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုတွင် လူ ၃၀ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
ကလေးငယ်များအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ပိုလန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ မိုးသည်းထန်စွာ ဆက်လက်ရွာသွန်းနေပြီး ရွှံ့မြေပြိုမှုများကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးကာ ၅ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
အမေရိကန် အိုလံပစ်ကျွမ်းဘားမယ် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ
တောင်ကိုရီးယား စစ်တပ်က ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားနေသည့် ကျွန်းငယ်များအနီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်မည်